मलेसियामा मृत्युदण्ड सुनाइएका एक दर्जन बढी नेपालीको यस्तो हालत, नेपाल सरकार मौन ! « Surya Khabar
मलेसियामा मृत्युदण्ड सुनाइएका एक दर्जन बढी नेपालीको यस्तो हालत, नेपाल सरकार मौन !
मलेसिया । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी । आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आस मर्योल ।’ रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटक-पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन् ।
लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए । अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । मंगलबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको खुलेको बस्न्यातले बताए ।
यता, संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका संयोजक सांसद भरत खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अवस्था र यहाँ हुने गरेका घटनालाई अध्ययन गरी समाधान गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए । राज्य नै जनताको पक्षमा नहँदा समस्या आएको उनको धारणा छ ।